Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Azafady amin’ny rehetra, indrindra fa amin’ny olom-pady | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Azafady amin’ny rehetra, indrindra fa amin’ny olom-pady
Raha hiresaka fanamelohana zavatra mamoafady dia miala tsiny, miala fondro raha voatery hanonona mivantana ilay raha, antony anaovana tsikera na hiezaka araka izay azo atao aza mba tsy handratra ny sofin’ny mpianakavy.
Famonoam-bady no anton-dresaka. Raha famonoam-bady no teny ifehezana ny setrasetra isan-karazany na am-bava izany na daroka totohondry aman-daka, na tonga hatrany amin’ny fifofona aina amin’ny fisehoana fiverenana amin’ny maha biby fotsiny, eo amin’ny ankamaroan’ny fisehoan’ny famonoam-bady dia ilay ramatoa no sorona ary ilay rangahy no biby. Mitovitovy isaky ny tokantrano zato ny salan’isan’ny fitrangan’ny famonoam-bady eto amin’ny nosy sy any ivelany, tsy afaka nanivaiva toy ny fahazarany ireo vahiny mitaiza toe-tsaina fanjanahana amin’ny fanambanimbaniana ny mponina ivahiniany. Na izany aza, tsy ny fanaovana fampitahana kilema amin’ny sasany no hahafahana manala tena amin’ny andraikitra noho ny fanefana heloka.
Bitsibitsitsika tsy mipika any amin’ny sofina vahiny, mety eto amin’ny nosy ho vitsy noho ny any ivelany ny tahan’ny fanaperan’aina efain’ny mpamono vady. Sandan’izay anefa, angamba isika anisan’ny voalohany amin’ny mponina eto an-tany amin’ity fanompany reny ity. Ho an’ny olona maro, lasa toy ny fipitiky ny rora ny fisesik’izany ompa izany avy ao am-bavany. Tsy vazivazy fa tena mahalasa saina ny fahazaran’ny sofina, na ankizy izany na zokiolona, na vehivavy na lehilahy, na miseho an’ny tenany tsy kasihan-dalitra na malotoloto ny lamba tafiany, tsy taitra tsy madilo nefa samy mahalala daholo ny ompa fonosin’ny sioka, kilaxao-na fiara na fipepehana fotsiny ka manako «ti-ti-tin–tihy» na «ta-ta-tan–taha».
Rehefa mandinika izay «kiririoka» iarahan’ny rehetra mitsikombakomba amin’ny fiaretana azy mody tsy maheno ankitsirano izao, dia menatra ihany, fiarahamonina kerisay mitampim-tsofina amin’ny fiforetana manoloana ny ratsy. Dia teny aza tsy hay manohatra mainka izany fa fitaovam-piadiana mahery vaika, nefa samy miady hiseho ho mpivavaka sy hilaza fahavononana hijoro vavolombelon’ny Andriamanitra ivavahany. Io anie porofo fa na am-bava aza mitory ny fomba andavan’andro eto an-toerana amin’ny tsy fanajana vehivavy, reny avy aza voavetaveta tsy asiana hasiny. Toy ny ady tsy maintsy atao amin’ny fampielezana sy fanarina fako tsy manaraka fepetra, ny ady amin’ny toetra maloto miseho eny ankalamanjana, na avy amin’ny tànana diso fitsapa na avy amin’ny vava nivilana fiteny.